२४ घण्टा नबित्दै करोडपति बुबाको छोरा सम्पर्कमा – घर आउछु भन्दै डाको छोडेर रोए हेर्नुस – Khula kura
२४ घण्टा नबित्दै करोडपति बुबाको छोरा सम्पर्कमा – घर आउछु भन्दै डाको छोडेर रोए हेर्नुस
अधिकांश रुपमा महिला हिं सा को बारेमा सुनेका छौँ तर महिला मात्र हिं सा मा परेका छैनन्, पुरुष समेत घरेलु हिं साको शि का र भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थित कुमारीगढका एकजना ७० वर्षीय व्यक्ति दामोदर प्रसाद अधिकारी आफ्नी श्रीमतीको रातदिन या तना सहन नसकी विगत १२ वर्षदेखि सडकमा भौंतारिँदै हिँडिरहेका छन्।
उनी अहिले एक मन्दिर वरिपरि बसिरहेका छन्। उनलाई मन्दिर नजिकै बसेर धेरै दिन देखी बस्दै आएको देखेर अनलाइन टीभीका पत्रकारले सोधेर अन्तर्वार्ता लिएका थिए।
उनलाई अहिले मिडियाले प्रसारण गरेपछि उनको छोराले घर आउनु बुबा भन्दै फोन गरे। उनले लिन आउन आग्रह गरेपछि तपाईं आफैं आउनु न घर पहिले कै ठाउँमा छ,सरेको छैन भनेर जवाफ दिए।उनी
भन्छन्,जब छोराको बोली सुनेँ, सानैदेखि काँधमा हालेर हुर्काको, पढाएको, बढा एको याद आयो,सानैदेखिको कुरा सम्झिँदा त रुन मन लागेर आउँछ नि।
उनको घरमा दुई छोरा,एक छोरी र श्रीमती छन्। छोरीको चाहिँ बिहे भैसकेको छ। घरमा श्रीमतीसँग नराम्रो भैसकेपछी,रातदिन पैसाकै कारण झ’ग’डा पर्न गएका कारण उनी आफू ज्यान बचाउनकै लागि घरबाट बाहिरिनु परेको बताउँछन्। श्रीमतीको गा ली ,क चक च,श्रापले गर्दा उनी सँगै बस्न सकेका छैनन्।
उनकी श्रीमती खासगरी उनको काइँली दिदीले उचालेको भरमा श्रीमती आफू माथी खनिएको उनको आ’रोप छ।
घरभित्रको हरेक कुरामा आफूलाई अन्याय गरेको,रासन पानीमा समेत आफूलाई अन्यायमा पारेको,घरभाडा पनि उठाएर आफूलाई नभनेको,घर व्यवहारको कुनै पनि कुरा आफूलाई जानकारी नदिएको उनले बताएका छन्।
उनी भन्छन्,श्रीमतीले बिहान उठेदेखी नि मुखबाट राम्रो कुरा ननिकाल्ने, कहिले पनि राम्रोसँग नबोलाउने,जतिखेर पनि आफ्नो बारेमा म’र्न न स क्ने भन्दै तथानाम बोल्ने,बिहान उठेदेखी बेलुकासम्म उसको मुखबाट निस्कने भनेको आफ्नो बालबच्चा र श्रीमानलाई सराप मात्रै थियो।
बाकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस
के युएइ जान नपाइने हो अब ! नेपाल बारे किन यस्तो निर्णय लियो यूएईले ?
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अवरुद्ध, – पहिरो पन्छाउन अझै केही घण्टा लाग्छ